सरकारले तोक्यो नयाँ करको दर, कुन शीर्षकमा कति ? [सूचीसहित]
आन्तरिक राजश्व विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९का लागि नियमित पारिश्रमिकदेखि पटके भुक्तानीसम्मका विभिन्न दरहरू तोकेको छ । यो वर्षका लागि तीनवटा शीर्षक अग्रिम करकट्टीका लागि थपिएका छन्। चालु वर्षको ऐन आएपछि विभागले करको दर सार्वजनिक गरेको हो। वस्तु तथा सेवा खरिद वा उपभोग गरे बापत भुक्तानी दिँदा तोकिएको कर कट्टी राजस्व खातामा गरेर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले आयकर ऐनमा गरेको परिवर्तनअनुसार विभागले नेपालमा बसेर सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेर आम्दानी गर्नेहरूले नेपालमा १ प्रतिशत कर तिर्...
१२५ सीसीदेखी हजार सीसीसम्मको मोटरसाइकलको मूल्य बढ्यो, कुनको कति बढ्यो कर ?
सरकारले मोटरसाइकलको अन्त:शुल्क बढाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अन्त:शुल्क बढाएका हुन्। सरकारले भन्सार शीर्षक ८७११.२०.९२ मा आयात हुने १ सय २५ सीसी नाघेको तर २ सय सिसी ननाघेको मोटरसाइकलमा १० प्रतिशत अन्त:शुल्क वृद्धि गरेको छ। यो शीर्षकमा अब ५० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। यो भन्दा अघि ४० प्रतिशत लाग्दै आएको थियो। यस्तै भन्सार शीर्षक ८७११.२०.९९ मा आयात हुने २ सय सीसी नाघेको तर २ सय ५० सीसी ननाघेको मोटरसाइकलमा १० प्रतिशत अन्त:शुल्क बढेको छ। अब यो श...
सरकारको रातो किताबलाई कोरा मानिसको आँखाबाट एकसरो हेर्ने हो कतिपय बजेट शीर्षक नै कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचारका कारक हुन् झैं देखिन्छन् । खासगरी सरकारी बजेटलाई सर्वसाधारण र सरकारी कर्मचारीहरूको दुई आँखाले हेर्न सकिँदो रहेछ । हामी सर्वसाधारणलाई बजेटमा कतिसम्म मात्रै मतलब छ भने कर बढ्यो कि घट्यो, केमा कति बढ्यो÷घट्यो वा मेरो गाउँ, क्षेत्र, बस्तीका लागि […]
बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन र भ्रष्टाचारबारे ट्रान्सपरेन्सीले दिएको प्रतिवेदनलाई आजका अखबारहरूले प्राथमिकतापूर्वक छापेका छन् । यसबाहेक स्थानीय तहको कर, मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयलगायत विषयलाई पनि पत्रपत्रिकाहरूले समेटेका छन् । ‘स्थानीय तहमा अचाक्ली कर’ शीर्षक दिएर कान्तिपुरले स्थानीय …
दोहोरो वासलात अन्त्यपछि ब्यवसायीले ऋण ब्यक्तिगत बनाएर नवीकरण गर्न थाले
काठमाडौं। सरकारले गरेको नयाँ ब्यवस्थापछि पुराना ग्राहकले ऋणको शीर्षक परिवर्तन गरेर नवीकरण गर्न थालेका छन्। सरकारले कर तिरेको र
बीजमांडू मंसिर २०७६
नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकामा कर वृद्धि शुन्य !
नवलपरासी – स्थानीय तहहरुमा भएको चर्को कर वृद्धिले नागरिक मारमा परेको चर्चा चलिरहँदा नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाले भने करको वृद्धिदर शून्य प्रतिशत बनाएको छ । गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको करका शीर्षक र दर रेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिका प्रमुख रामप्रसाद पाण्डेले गएको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भन्दा यस वर्ष कतिपय कर ...
यी ११ शीर्षकमा कर उठाउन पाउनेन् स्थानीय सरकारले
काठमाडौं : स्थानीय सरकारले खानेपानी, धारा, पोखरी र घाट, बिजुली, टेलिफोन, वातावरण फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई र ढल व्यवस्थापनमा अतिरिक्त शुल्क लगाई कर उठाउन पाउने भएको छ। सरकारले हालै तयार पारेको स्थानीय तहबाट कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानुनको मस्यौदा २०७४ अनुसार विभिन्न ११ शीर्षक...
डा. चन्द्रमणि अधिकारी सङ्घीय संरचनामा विभिन्न तहका सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वका शीर्षक फरक भए पनि आयका स्रोतको प्रकृति र आधार...
ललितपुर महानगरपालिकाभित्र करको दररेटमा परिवर्तन, के-केमा भए परिवर्तन ?
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४ ७५ को लागि करदाताको दायरा बढाउने क्रममा केही शीर्षक भित्रपर्ने करको दरमा परिवर्तन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षकोलागि महानगरपालिकाले व्यवसाय कर, सफाई महसुल, विज्ञापन कर, सिफारिस दस्तुर र घर बहाल कर शीर्षकको दरमा केही परिवर्तन गरेको हो ।
कर शीर्षक घटाए इन्धन सस्तिने
नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट पेट्रोल प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ चार पैसामा खरिद गर्छ तर यहाँ दोब्बर बढी एक सय रुपैयाँ लिटरमा बिक्री गरिरहेको छ । विलासी सामानबाहेक अति आवश्यक दैनिक उपभोग्य कुनै पनि वस्तुको मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा राखेर बेचे कालोबजारी भएको ठहर हुन्छ ।
Shukrabar by Nagarik जेष्ठ २०७४